ပါဝါ:37KW + 1.1KW + 2.2KW အဆင့်သုံးဆင့်
စိုစွတ်သောအမျိုးအစားရှိသောရေပေါ်ငါးအစာထုတ်စက်တွင်ရေနွေးငွေ့ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်ဘွိုင်လာတပ်ဆင်ထားသည်. ရေပေါ်ငါးအစာထုတ်စက်သည်မျိုးစုံထုတ်လုပ်နိုင်သည် aqua feed ကိုရေပေါ်သို့မဟုတ်နစ်မြုပ် ငါးဘို့, ငါးရှဉ့်, ပုစွန်, ဂဏန်း, ။ ။, မြဝတီ, စသည်တို့, နှင့်ကြောင်များအတွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် feeds အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ခွေး, စသည်ဖြင့်. တောင့်သည်အရွယ်အစားမှာ ၀.၉ မှ ၁၅ မီလီမီတာမှအမျိုးမျိုးသောငါးများကိုကျွေးနိုင်သည်. အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ, စိုစွတ်သောအမျိုးအစားနစ်မြုပ်ခြင်းနှင့်ရေပေါ်ငါးအစာကြေထုတ်စက် အလတ်စားနှင့်အကြီးစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်ငါးမွေးမြူရေးခြံများအတွက် ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်.
▶ဝက်အူဖုံးသည်အကျီ့ဆောက်လုပ်ထားပါသည်, အရာရေနွေးငွေ့သို့မဟုတ်အအေးရေနှင့်အတူထိုးသွင်းနိုင်ပါတယ်, အရှင် extruding အပူချိန်ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်.
▶အေးစက်သည့်ပစ္စည်းများသည်အပူများကိုရေနွေးငွေ့နှင့်စက်မှုညှပ် / ရောနှောပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ပစ္စည်းများကိုအပြည့်အ ၀ gelatinization ဖြစ်စေနိုင်သည်. အဆိုပါပစ္စည်းများ 180 ကျော်ကျော်အချိန်များအတွက်အေးစက်၌တည်လိမ့်မည်.
Floating Fish Feed Pellet Extruder ၏ထူးခြားချက်များ
1. ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်ထုတ်စက်သည်ဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိဘဲရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမျောပါနေသောငါးအစာတောင့်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ 12 နာရီ; ငါးအစာတောင့်သည် ၀.၉ မှ ၁၅ မီလီမီတာရှိနိုင်သည်
3. လျှပ်စစ်အပူပေးစက်ကို အသုံးပြု၍ အစာချဲ့ထွင်မှုနှုန်းနှင့်အမြှေးပါးများရေပေါ်အချိန်ကိုတိုးတက်စေသည်.
4. သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းများကိုမြင့်မားသောအပြောင်းအလဲနဲ့တိကျစွာနှင့်အတူလေဟာနယ်မီးငြိမ်းသတ်ကုသမှုမှတဆင့်လုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်, ထို့ကြောင့်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝရှိသည်.
6. Single- ဝက်အူ extrusion ချက်ပြုတ်: မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နိုင်စွမ်း; variable ကိုဝက်အူအမြန်နှုန်း
အစာတောင့်တောင့်ထုတ်စက်စက်၏အဓိကအချက်မှာအလုပ်လုပ်သည်: ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း, ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်ပုံဖော်သေ. ဘွိုင်လာနှင့်အတူစဉ်ဆက်မပြတ်အေးစက်သို့ပူရေနွေးငွေ့ပေး, ပစ္စည်းများအပြည့်အဝချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်နှင့်အာဟာရတန်ဖိုးတိုးတက်လာသည်. ချက်ပြုတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အချဉ်ဓာတ်များသောဂျယ်လတ်ဂျင့်ဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, ကောင်းမွန်သောရေတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူ feeds တွေကိုရလဒ်များ. ငါးအစာဖြန့်ဖြူးစက်သည်ရှည်လျားသောစည်ဖြစ်ပြီးအတွင်းပိုင်းတွင်အပေါက်တစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်းသည်အပူအအေးနှင့်ရေနွေးငွေ့ဖိအားများမှအစာအရောအနှောများကိုအထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။. အစာကျွေးသည့်စည်ရဲ့အဆုံးမှာသေဆုံးသည်, ပိတ်မိနေသောရေနွေးငွေ့လျင်မြန်စွာချွတ်မှုတ်, ပျော့ပျောင်းသောပူပြင်းသည့်လုံးလေးများသည်ချဲ့ထွင်ထားသည်, နှင့်အနိမ့်သိပ်သည်းဆ floating လုံးလေးများထုတ်လုပ်သည်. ထို့နောက်ဖြတ်တောက်သောကိရိယာသည်လိုအပ်သည့်အတိုင်းဖွဲ့စည်းထားသောလုံးလေးများကိုအလျားလိုက်ကွဲပြားနိုင်သည်. အဆိုပါ extruder အလွန်စွယ်စုံဖြစ်ပါတယ်, များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ feeds တွေကိုစေနိုင်သည်.
Floating Fish Feed Pellet Extruder ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်း
1. ငါးအစာတောင့်ထုတ်စက်သည်ငါးအစာလုံးလေးများထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ငါးရှဉ့်, ပုစွန်, ဂဏန်း, ။ ။, မြဝတီ, စသည်တို့, နှင့်ကြောင်များအတွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် feeds အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ခွေး, စသည်ဖြင့်.
2. feed pellet extruder သည်အများအားဖြင့်အလတ်စားနှင့်အကြီးစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်ငါးမွေးမြူရေးခြံများတွင်ဖြစ်သည်.
3. အဆိုပါကုန်ကြမ်းဂျုံနိုင်ပါတယ်, ပဲပုပ်, ကိတ်မုန့်နှင့်အခြားကျန်ကြွင်းစသည်တို့. ၎င်း၏အဓိကအလုပ်နိယာမမှာပစ္စည်းစွမ်းအင်ကိုအပူစွမ်းအင်အဖြစ်စက်မှုစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်.
Floating Fish Feed Pellet Extruder ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ငါးအစာကျွေးသော extruder စက်၏ဗီဒီယို